Xog rasmi ah : – Cadaawadii iyo waxyeeladii Puntland loo geystay iyadoo la adeegsanyo magaca Dawlada Somaaliyeed 4tii sano ee Damul-jadiid, Maxaase hadda laga filayaa ? | puntlandi.com
Sunday, March 5th, 2017 | Posted by Al
Xog rasmi ah : – Cadaawadii iyo waxyeeladii Puntland loo geystay iyadoo la adeegsanyo magaca Dawlada Somaaliyeed 4tii sano ee Damul-jadiid, Maxaase hadda laga filayaa ?
Damul-Jadiid Maxey Reer Puntland u geysteen inti ay Xilka hayeen iyagoo si guracan oo cadaawad ah u adeegsanya awoodii iyo magacii dawladnimada Somaaliyeed ee ku soo ambatay??
1. Ardeydii Reer Puntland ee Sudan deeqaha Waxbarasho ka helay oo ay hor istaageen iyagoo Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibbada Gacal Sudan u direy si loo hor istaago Ardaydaas.
2. Shahaadadii Dugsiyada-sare ee Puntland oo Dalalka Sudan ay kamid tahay lagu yiri ha Aqbalnina mid aan ka aheyn Mogadisho.
3. Mashaariicda Horumarinta sida dhismayaasha Schoolada, Hospitalda, Jidadka IWM ee Magaca Soomaaliyeed lagu helay oo Reer Puntland Isbaaro looga dhigtey.
4. Deeqaha kala duwan sida Baabuurta dabka-damiya Umbalances Cagaf-cagafiyada Iyo Qalabka kala duwan ee Magaca Soomaaliyeed lagu helay oo aysan wax ka helin.
5. Deeqaha Dhaqaale ee Soomaaliya lasiiyay oo aan Puntland wax laga siin ilaa iyo Maanta.
6. Qunsulada Safaaradaha ay Magacaabeen oo Reer Puntland 1-Mid ah aan laga siin.
7. Qunsuladii uyo Shaqaalihii Reer Puntland ee Safaaradaha joogey oo xilalka laga qaadey sida Saudi-Arabia.
9. Safiiradii la magacaabey oo aan 1-Safiir Reer Puntland la siin.
10. Safiirada Dalalka Soomaaliya Dariska la ah oo Reer Puntland loo diidey sida, Kenya Ethiopia Djabouti IWM.
11. Agaasimayaasha guud ee Wasaaradaha oo Reer Puntland laga hor istaagey
12 Shirarkii Caalamk ee Puntland lagu casumi jirey oo ay hor istaageen Damul-Jadiid, sidii kii London, iyo Belgium oo ay ku fashilmeen iney hor istaagaan.
13. Dastuurkii ay Reer Puntland Maal iyo Wakhti Galiyeen oo ay ka badaleen Qodobo badan.
14. Dilkii Xildhibaan Faysal, Ee Madaxtooyada ka dhacey, kadib Taageeradii uu Taageerey Ex-Raisal-Wasaare Saacid.
15) Reer Puntland oo wacad lagu marey ineysan Raisal-Wasaare qaadan lagana hor keeno Beelaha kale ee Daarood
16. Shaqaalaha Madaxtooyada oo laga sifeeyay Qof Reer Puntland ah.
17. Qalabka Ciidamada ay baxsheen Dawlado badan oo aan Ciidanka Puntland xaqooda lasiin.
18. TV-ga Dawlada oo lagu Amrey inuusan Barnaamijyo Bilicda iyo Horumarka Puntland ah sii deyn.
19. Safaarada Dibbada iyo Shirarka Caalamka oo laga reebo Qof Reer Puntland ah.
20. Training loo diro Shaqaalaha Dowlada ee Dalalka Dibbada oo Qof Reer Puntland laga hor istaago.
Su’aashu waxay tahay maxaa laga filan karaa isbedelka cusub ee dalka ka curtay? Iyadoo aaney qumaneyn in laga hor dhaco haddana cid diidi kartaa ma jirto in ifaafaale iyo odoros laga sii sheego, mar haddi la yaqaan goobta xukuumadu ka hawl galeyso oo ah magaalada Muqdisho.
Somaalidu waxay tiraahadaa ” nin cadadii ma baajo,bahala cayriin ma baajo” wey iska cadahay waxay noqon doontaa xukuumad iyo dawladnimo mar kale u dhalatay xaafadaha qabaailku xukumaan ee Xamar,oo wixii manafacaad dawladnimo iyo gaargaarka iyo dibu dhiska caalamku ay somaaliya ugu tala galeen aanay iyaga kaligood soo dhaafin oo halkaa lagu qeybsado.
Iska sug sidii hore in Puntland iyo somaalida intooda badni ay dawldnimada Xamar marti u noqdaan.
Iska sug sida haddaba la sheegay Midowga Yurub oo loo sheego in Booliska Somaaliya yahay midka Xamar jooga oo kaliya oo mushaharaadkooda la siiyo.
Iska sug M/weynaha iyo Raisal wasaaraha oo ciidanka Xoogga Dalka u aqoonsan maleeshiyooyinka beelaha ee Xamar kaliya jooga,una hawl gala qalbeyntooda,daryeelkooda iyo tababarkooda,dalka intiisa kalena aan dan iyo muraad ka gelin.
Wey sii socon dontaa in deeqaha waxbarsho ee loogu deeqo dhalinyarada Somaaliyeed lagu boobo,laguna gato Xamar.
Sidoo kale wey sii socon dontaa xildhibaano reer Puntland ah iyo xubno ka mida xukuumada oo la haystayaal ku ah Hotel-ada ay degen yihiin,kii dibada u soo baxna la dilo.
Sidoo kale waad arki doontaa bulsho hungri iyo xil doon u wada xaydan oo mabdaoodu yahay maxaan xadaa iyo maxaan cunaa.sidoo kale guulwadeynta,ururada bulshada ee lagu xamaasho,asxaabta ku qaraabta magaca NJO-yada,qurbo joogta saaqidiinta ah ee xildoonka ah iyo Odayaasha qabaa’ilka Somaaliyeed ayaa Xamar qasi doona inta xukuumadu cusub tahay,ee wax laga luf-lufan karo.
Ka war sug Musharxiin hore iyo iskood u xamaashoodayaasha siyaasadeed ee Puntland oo hadda Xamar u jooga xil raadin sida Siciid Deni,Ilkajiir, Cali Warsame,Dr.Cali Ciise,ina Xasan Abshir,Cabdi Barre,Siciid Ciid iyo Maxamed Faroole iyo warbaahintiisa Garoweonline oo haddii ay wax soo wayaan caro inagula soo noqon doona
Teeda ku sug